ကျနော်တို့ရဲ့ ပါတနာရှစ် အစီအစဉ်က သင့်ရဲ့ဝင်ငွေကို အမှန်တကယ်သိသိသာသာ ပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မယ်!
FBSကို ဘာ​ကြောင့့်​ရွေးချယ်​တာလဲ?
EUR/USD အတွက် ကော်မရှင်–1 lot ကို ၁၅$ ကော်မရှင်ပေးခြင်း
အဆင့် ၃ဆင့်ရှိသည့် ပါတနာအစီအစဉ်
လစဉ် ဘော့နပ်စ် ပေါင်းထည့်ပေးခြင်း
ပါစင်နယ် ဖာက်သည်ရှာဖွေရေး မန်နေဂျာများ
၂၄/၇ ကျတော်တို့ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့
ကျွန်ုပ်သည် /docs/FBS_agreement_my.pdf စည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံပါသည် အခြေအနေများနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒ ကို လက်ခံပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တွင် ရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း လည်ပတ်ခြင်းနှင့်အတူ ရှိလာနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
ဒါက သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို တိုးတက်စေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအိပ်မက်များကို ပြီး ပြည့်စုံစေမှာပါ
ငွေကြေးဆုံးရှုံမှုမရှိဘဲ အမြတ်ငွေယူပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ
သင့်ဖောက်သည် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့ lotတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ကော်မရှင်ကို ၈၀$အထိ တိုးမြှင့်လိုက်ပါပြီ
သင့်ရဲ့ အမြတ်ငွေတွေ အပေါ်မှာ စုစည်းထိန်းသိမ်းပါ: သင့်ဖောက်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့အလုပ်မှာ ပိုမိုတက်ကြွလေလေ သင်ဟာ ၀င်ငွေပိုမိုရရှိလေဖြစ်ပါတယ်
အခမဲ့ပရိုမိုးရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အထောက်အကူများမှ ရွေးချယ်ရယူစရာတစ်ခု
တောင်းဆိုမှုတွေ အေးအေးဆေးဆေးတိုးမြင့်ရရှိဖို့အတွက် အထူးခြားဆုံးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုရယူဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်း
AIG ALCOA ALIBABA AMAZON APPLE AT&T AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD BAC Bitcoin BRN CADCHF CADJPY CHFJPY CISCO CITIGROUP CNHJPY COCA-COLA DASH DAX30 DISNEY EBAY Ethereum EURAUD EURCAD EURCHF EURCNH EURGBP EURJPY EURNZD EURTRY EURUSD FACEBOOK FORD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD GBPUSD GE GM GOOGLE HP IBM INTEL JPM LiteCoin MASTERCARD MCDONALDS MICROSOFT NETFLIX NIKE NVIDIA NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD ORACLE PEPSICO PFIZER TESLA USDBRL USDCAD USDCHF USDCNH USDJPY USDMXN USDTRY USDZAR VISA WALMART WTI XAGUSD XAUUSD
၁. သင့်ဖောက်သည်တွေ အကောင့်ဖွင့်ဖို့ သင့်ရဲ့ ပါတနာလင့်ကို အသုံးပြုပါ
၂. ဖောက်သည် အရောင်းအ၀ယ်တွေလုပ်တာနဲ့
၃. သင်ဟာ ကော်မရှင်ခရပါပြီ
၄. ကော်မရှင်အမြတ်ငွေကို နေ့စဉ်ထုတ်ယူပါ
အခြားပါတနာများကို FBSတွင်ရောင်းဝယ်ရန် ဆွဲဆောင်ပြီး ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဝင်ငွေကို ရယူပါ
သင်ဟာ တိုက်ရိုက်သွင်းထားတဲ့ဖောက်သည်ဆီက ကော်မရှင် ၁၀၀% ရရှိပါမယ်
ဥပမာ: သင့်ဖောက်သည် ၂၅ ယောက်ဟာ တစ်လကို lot ၅ ခုပြည့်အောင် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ .
သင်ဖောက်သည်လက်အောက်က နောက်ထပ်ဖောက်သည်တွေဆီကနေပြီး ၁၅%ကော်မရှင်ရရှိနိုင်ပါတယ်
ဥပမာ: ဒုတိယအဆင့် ဖောက်သည် အယောက် ၅၀ဟာ တစ်လကို lot ၅ ခုပြည့်အောင် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့.
သင်ဖောက်သည်လက်အောက်က နောက်ထပ်ဖောက်သည်တွေဆီကနေပြီး ၅%ကော်မရှင်ရရှိနိုင်ပါတယ်
ဥပမာ: တတိယအဆင့် ဖောက်သည် အယောက် ၁၀၀ဟာ တစ်လကို lot ၅ ခုပြည့်အောင် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့.